धुलिखेल–बर्दिवास सडकमा ‘पासिङ जोन’ निर्माण गरिने Bizshala -
यती एयरले सस्तोमै पर्यटकीय गन्तव्य घुमाउने, कुन प्याकेजको कति ?
एनएमबीले ल्यायो कर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, वित्तीय क्षेत्रकै नौलो सेवा
धुलिखेल–बर्दिवास सडकखण्डमा सवारी साधन केही समय राख्न र रोक्न (पासिङ जोन ) निर्माण गरिने भएको छ ।
एक लेन चौडाइको सो सडकमा एउटा सवारीसाधन बिगँ्रदा अथवा राकिएर रहँदा सवारीसाधन आगमन ठप्प हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने ठाउँ ठाउँमा पासिङ जोन निर्माण गर्न लागिएको हो ।
एक सय ६० किमि सडकमा चार पाँच सय मिटरको दूरीमा जोन निर्माण गर्ने गरी योजना बनाइएको आयोजना व्यवस्थापक सूर्यबहादुर भाटले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार चार खण्डमा विभाजित सडकमा सबैभन्दा साँघुरो भागका रुपमा खुर्काेट–नेपालथोक रहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “चौडाइ बढी भएकोभन्दा कम चौडाइको सडकमा बढी आवश्यक देखिएको छ ।”
साँघुरो सडकमा पछिल्लो समय सवारी चाप बढिरहेको हुँदा यसको विकल्पको खोजी शुरु गरिएको हो । बिसाउन र रोक्न मिल्ने स्थान भएकैमा सवारीसाधनले उछिन्ने पनि गर्न सक्छन् । सडक विस्तारको तयारी अघि बढिरहँदा ‘जोन’ पनि तयारी भएको हो । आयोजना व्यवस्थापक भाटले भन्नुभयो, “सडकको बढी साँघुरा स्थानमा जोन निर्माणको योजना बनाइएको हो ।”
सडक विभागले अन्य राजमार्गमा पनि पासिङ जोन निर्माण गर्दै जाने नीति बनाएको छ । निर्माणाधीन नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गमा पनि बिसाउन र रोक्न मिल्ने स्थानसमेत डिजाइनमा छ ।
मुख्य सुरुङमार्गमा तीन वटा सवारीसाधन सहज आवतजावत गर्न सक्ने र एउटा गाडी बिगँ्रदा पनि दुईवटै गाडी चल्न सक्नेछन् । सहायक टर्नेल तत्काल उद्धारका लागि हुने बताइएको छ । ठाउँठाउँमा मुख्य सुरुङबाट सहायक सुरुङ प्रवेशको द्वार बन्नेछ ।
यसपालिको दशैंमा घर जान ट्याक्सी सेवा सञ्चालनमा, इजी ट्याक्सी
काठमाण्डौ । कोरोनाभाइरसको महामारीका बीचमा देशभर सार्वजनिक...
धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म सञ्चालनका लागि रेल आएसँगै देश...
विदेशी च्यानलहरुमा कात्तिक ७ गतेसम्म क्लिन फिड लागू गर्न
काठमाण्डौ । नेपालमा प्रसारण भइरहको विदेशी च्यानलहरुलाई...
पर्सा प्रशासनले तोक्यो प्याजको मूल्य, किलोको रु. ७५, अन्य
वीरगञ्ज । भारतले प्याजको निर्यातमा रोक लगाएपछि नेपालमा त्यसको...
'क्लिन फिड' समयै लागू हुन्छ, भ्रमको खेती हुनु दुर्भाग्य: आन
काठमाण्डौ । नेपाल विज्ञापन संघ(आन)ले क्लिन फिडको विषयमा �...
नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा ६० अर्बभन्दा बढीको घाटाःसंस्कृति,
काठमाण्डौ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार...
धरान उपमहानगरपालिकाको कर भुक्तानी कनेक्ट आइपीएसमार्फत्
काठमाण्डौ । अब धरान उपमहानगरपालिका जनताले तिर्नुपर्ने सबै कर...
सार्वजनिक यातायात: ‘न स्यानिटाइजर न दूरी, भाडा मात्र बढी’
काठमाण्डौ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम कायमै रहँदा खुलेका...